Zvakanakira vana kuva nembwa iwe yaunofanirwa kuziva | Bezzia
Iwo mabhenefiti makuru evana ekuva nembwa
Iwo mabhenefiti makuru evana ekuva nembwa anozoonekwa kubva panguva yekutanga. Nekuti ichokwadi kuti dzimwe nguva kana kuva nechipfuwo kunoita kuti tifunge nezvacho kanopfuura kaviri. Hatizive kuti kubatana uku pakati pevana nemhuka kungave sei, kunyangwe seyakajairika mutemo kunogara kuchizadza hunhu.
Iyo yakawanda kwazvo inoda mhuka nembwa kunyangwe zvishoma zvishoma. Saka chatova chiratidzo chakanaka uye nhau dziri nani. Asi ndizvo izvo mushure meizvi zvese pane kukura kwepfungwa kunobatsira vana vako. Saka, inguva yekuziva zvakadzama zvese zvakanakira kuve nemhuka pamba.
1 Imbwa Dzinobatsira Sei Vana: Ivo Vanoderedza Kushushikana Kwavo
2 Hutano huri nani uye mashoma maitirwo
3 Inzwa wakachengeteka
4 Vachafamba zvakanyanya
5 Ivo vanova vanoitira hanya zvikuru
6 Ivo vanovandudza zvine hukama zvisungo
Imbwa Dzinobatsira Sei Vana: Ivo Vanoderedza Kushushikana Kwavo
Kana vana vachikura nembwa, chisungo chakakosha chinokura. Zviri pachena kuti mhuka ishamwari dzakanaka nevana uye zvinopesana. Nekudaro, ivo vanonzwa kudzivirirwa zvakanyanya, chimwe chinhu icho zvinomutsa kuzviremekedza zvishoma nezvishoma uye nekudaro, icharerutsa kusagadzikana uko kunogona kuoneka kana, kusagadzikana kunowedzera kune mamwe matambudziko. Kungogumbatira kana kubata imbwa, kushushikana uku kunodzikiswa. Saka yatove imwe yemabhenefiti makuru ekufunga nezvayo.
Hutano huri nani uye mashoma maitirwo
Kunyangwe chiri chokwadi kuti tinowanzo funga kuti nekuva nechipfuyo zvese zvichave kuva nezvirwere zvitsva uye zvakasiyana, hazvina kudaro. Muchokwadi, zvidzidzo zvinosimbisa kuti izvo zvinopesana ndezvechokwadi. Zvinotaridza kuti pakati pezvakanaka kwazvo zvevana zvekuva nembwa futi hutano huri nani hwakawanda hunowedzerwa, asi kunyanya kubvisa kumwe kurwara kubva muhupenyu hwedu. Izvi zvinodaro nekuti kana vachigara nemhuka vachiri vadiki, rudzi rwekudzivirira runokura uye immune system yevana inovandudzika.
Iwo madiki anonzwa akachengeteka zvakanyanya kuva nembwa kutenderedza. Nekuti izvi kukupa iwe iko kunzwa kwekuchengeteka. Sezvo ivo vachizogara varipo panguva yavanodiwa uye sezvo mhuka dzisiri kuzovatuka kana kuvanetsa, ivo vanoziva kuti itsigiro isingaite. Nekudaro, kune izvi zvese vanonzwa kusununguka pavanenge vari padivi pake uye izvi zvakabatana nechinhu chekare chatakataura nezve kunetsekana.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti vabereki ndivo vanozotora imbwa kuti vafambe, vadiki vanogona zvakare kuvaperekedza. Zvinopera pasina kutaura kuti kana iwe uchigara mumba, pachagara paine nzvimbo yakawanda yevana yekutamba nemhuka. Izvi zvinoita kuva nehupenyu hunoshanda. Chinhu chinogara chichikurudzirwa, nekuti pamusoro pekusimudzira hukama zvinoitawo kuti pfungwa dzijekerere, mufaro unouya kuhupenyu hwavo uye varaidzo inomhanyisa pamwe nekunzwa kwemufaro. Saka vanogara vakanaka kambani!
Ivo vanova vanoitira hanya zvikuru
Kunyangwe hachisi chinhu chatinoona kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, ichokwadi kuti mukufamba kwenguva tinogona kutaura izvozvo vadiki vanozova nebasa. Nekuti ivo vanozove vanoziva yakakosha fungidziro uye iri imwe yemabhenefiti evana ekuva nembwa. Vachafanirwa kutarisa kana vaine mvura kana chikafu nguva dzese, pamwe neizvo zvavanotibvunza kana kuti vakagwinya here kana kuti zvakapesana. Nekudaro, vana vanotanga kunetseka uye vane zvimwe zvisungo zvavanofanira kuzadzisa zvekuchengeta chipfuwo.
Ivo vanovandudza zvine hukama zvisungo
Zvinoita sekunge imwe bhenefiti yevana yekuva nembwa ndeye iyo ivo vanozoziva maitiro ekuita shamwari dzakanaka mune ramangwana. Nekuti ivo vachange vakura vaine chimwe chakakosha uye chakatsiga chavanogona kuve nacho. Saka zvakare chimwe chezvikamu zvakakosha mukudzidza uye hupenyu hwemwana mune zvese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mascotas » Iwo mabhenefiti makuru evana ekuva nembwa
Mutsva wekuunganidza muunganidzwa kubva kuZara uchishanda pamwe naKassl